Warshad Bacda Cuntada ee Shiinaha, Bacda Cannabis, Boorsada Waraaqda, bacda baaba'aysa - Beyin xirxirida
Xirxirida Beyin waa soo saare xirfad leh oo baako ka sameysan, waxaan ku takhasusay sameynta iyo soo saarida bacaha kafeega, bacaha xashiishadda, bacaha shaaha, boorsooyinka fudud, boorsooyinka lowska, bacaha miraha la qalajiyey, bacaha hadhuudhka, bacaha cuntada xayawaanka, bacaha budada ah, bacaha suugada, bacaha faakiyuutka, bacaha retort, bacaha qaboojiyaha, bacaha bullaacadaha, bacaha waraaqaha, duub filim, iwm, bacaha la baabi'in karo sidoo kale waa avaliable.
Cabirrada bacaha way ka duwan yihiin 0.5g illaa 1lb. Waxaa jira kuwo badan oo diyaar u ah inay markab soo daadiyaan, sida buskudka, runtz, wiilka hawdka, skittle, keega arooska, xargaha cusub, riyada buluuga ah, iwm. Sidoo kale waxaan sameyn karnaa noocyo badan oo ka mid ah boorsada iska caabbinta ilmaha, sida qanjaruufo N bacda jiifka ah, bacda jiinyeerka laba jibaaran, Boorsada jiinyeerka, iwm kaalay wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan diyaarka u ah rarida bacaha iyo bacaha qaaska ah!
Bacda kafee waa mid caan ka ah adduunka oo dhan, caadi ahaan waxay noqon kartaa bac fidsan, istaag bacda, bacda gusset-ka iyo bacda hoose ee fidsan. Qalab ahaan, ku dhowaad dhammaan macaamiisha ayaa doorbidaya wax-soo-saarka gudaha ku jira, laakiin qaar ayaa jecel dhammaystirka matt-ka halka qaarna ay jecel yihiin dhalaalaya. Furaha, haddii badeecadaadu ay tahay digir kafee ah, markaa waxaad u baahan doontaa hal waddo si ay hawadu u soo gasho, halka haddii alaabtaadu tahay budada kafee, magac ahaan aan loo baahnayn waalka.
Bacda haanta waxaa si weyn loogu isticmaalaa cabitaannada, suugada, iyo cuntada carruurta, iwm. Waxaa jira cabirro badan oo loogu talagalay bacaha qulqulaya, sida 50ml, 100ml, 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml, iwm. qulqulka caadiga ah ama cuncunka caabbinta ilmaha ee cunnooyinka, malab la'aan, jiinyeer caadi ah ama laba jiinyeer.
Kazuo Beyin Paper iyo Plastic Packing Co., Ltd. oo kan ka horeeya uu yahay Xiongxian Juren Paper iyo Caaga Xirxirida Co., Ltd, waxaa la aasaasay sanadkii 1998 bilawgiisii. In kabadan 20 sano oo horumar ah, hada baakada Beyin ayaa loo sameeyay si wax soo saar leh shirkad ku takhasustay soo saarista iyo soo saarista bacaha baakadaha caaga ah ee dabacsan. Awoodda wax soo saar waxay gaari kartaa 60million RMB sannad kasta; 7 aqoon isweydaarsi ayaa lagu dhisay 50 nooc oo qalab warshadeyn ah oo la rakibay. Waxaa jira in ka badan 100 shaqaale oo ka shaqeynaya xirxirida Beyin, 50 ka mid ah waa farsamo yaqaanno xirfadlayaal ah oo aqoon u leh shahaadada daabacaadda daabacaadda, 10 farsamo yaqaanno sare ah ayaa horay u qaatay warshadaha baakadaha ee 10years. Shaqaale khibrad leh oo hodan ah ayaa si buuxda u qanciya dhammaan baahida macaamiisha.
Xirmooyinka Beyin waxay ku bixisay shaqaalahooda si ay u sameeyaan baaritaanka nukleerka asiidhka
Xirxirida Beyin waxay bixisay shaqaalahooda si ay u sameeyaan baaritaanka nukleerka asiidhka Waqtigan xaadirka ah, xaalada ka hortaga faafida iyo xakameynta faafa ee Gobolkeena waa mid aad u daran, dad aad u tiro badan ayaa doorta inay sameeyaan nucleic acid iyaga oo iska bixinaya ...